Iindaba -Izibonelelo zeebhotile zeglasi njengezikhongozeli
Ibhotile yeglasi sisiqulatho sokupakisha sokutya kunye nesiselo kunye neemveliso ezininzi, ezisetyenziswa ngokubanzi. Iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha zembali. Kwimeko yeentlobo ezininzi zezinto zokupakisha ezithela kwimarike, isikhongozeli seglasi sisesikhundleni esibalulekileyo ekupakisheni isiselo, esingenakwahlulwa kwiimpawu zokupakisha ezingasoze zitshintshwe zezinye izinto zokupakisha.
Njengenye yeemveliso eziphambili zeglasi, iibhotile kunye neenkonkxa ziqhelekile kwaye zithandwa izikhongozeli zokupakisha. Kumashumi eminyaka akutshanje, ngokuphuhliswa kwetekhnoloji yoshishino, kuye kwaveliswa izinto ezahlukeneyo zokupakisha, ezinje ngeplastiki, izinto ezidityanisiweyo, iphepha elikhethekileyo lokupakisha, i-tinplate, ifoyile yealuminiyam njalo njalo. Iglasi, uhlobo oluthile lwezinto zokupakisha, kukhuphiswano olunamandla nezinye izinto zokupakisha. Ngenxa yeenzuzo zokungafihli, uzinzo lweekhemikhali olulungileyo, ixabiso eliphantsi, ukubonakala okuhle, ukuveliswa ngokulula kunye nokurisayikilisha, iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa ziseneempawu ezingenako ukubekwa kwezinye izinto zokupakisha ngaphandle kokhuphiswano lwezinye izinto zokupakisha. Ibhotile yeglasi yokupakisha luhlobo lwesikhongozeli eselubala esenziwe ngeglasi etyhidiweyo ngokuvuthela nokubumba.
Umthamo wokurisayikilisha kweebhotile zeglasi uyanda minyaka le, kodwa obu buninzi bokurisayikilisha bukhulu kwaye abunakulinganiswa. Ngokwe-Glass Packaging Association: Amandla agcinwe ngokusetyenziswa kwakhona kwebhotile yeglasi angenza i-bulb ye-watt eyi-100 ilayite malunga neeyure ezingama-4, usebenze ikhomputha imizuzu engama-30, kwaye ubukele imizuzu engama-20 yeenkqubo zeTV. Ke ngoko, ukurisayikilisha iglasi ngumba obaluleke kakhulu. Ibhotile yeglasi yokurisayikilisha isindisa amandla kwaye inciphisa amandla okulahla inkunkuma, enokuthi ibonelele ngezinto ezingasetyenziswanga kwezinye iimveliso, kubandakanya neebhotile zeglasi. NgokweNgxelo yeSizwe yeBhotile yabaThengi yePlastiki yeMveliso yeMichiza e-United States, malunga neebhiliyoni ezi-2.5 zeebhotile zeplastiki zaphinda zaphinda zaphinda zaphinda zasebenza ngo-2009, ngomlinganiselo wokuphinda usetyenziswe wama-28% kuphela. Ukurisayikilisha iibhotile zeglasi kulula kwaye kuyanceda, ngokuhambelana nezicwangciso zophuhliso ezizinzileyo, kunokonga amandla kwaye kukhusele izibonelelo zendalo.